Ukusika i-Laser yeKhaphethi yeenqwelomoya kuMzi-mveliso wezoPhapho - Wuhan Golden Laser Co., Ltd.
Ukusikwa kweLaser kweKhaphethi yeAircraft kwiCandelo loPhapho
Itekhnoloji yeLaser isetyenziswa ngokubanzi kwicandelo lokuhamba ngenqwelomoya kunye ne-aerospace, njengokucheba i-laser kunye nokubhola kweendawo zejet, i-laser welding, i-laser cladding kunye ne-3D laser cutting. Kukho iintlobo ezahlukeneyo zoomatshini be-laser kule nkqubo, umz. Amandla aphezulu e-CO2 laser kunye nefayibha laser kwizinto ezahlukeneyo. I-Goldenlaser inikezela isisombululo sokusika i-laser esilungiselelwe ikhaphethi yeenqwelo moya.
Ukongeza, ikhaphethi yokuhamba ngenqanawa inde kakhulu. Ukusikwa kwe-laser yeyona ndlela ilula yokusika ikhaphethi yeenqwelo moya ngokuchanekileyo nangokufanelekileyo. I-Laser itywina umphetho weengubo zeenqwelomoya ngokuzenzekelayo, akukho mfuneko yokuthunga emva koko, ekwaziyo ukusika ubungakanani obude kakhulu ngokuchaneka okuphezulu, ukugcina umsebenzi kunye nokuguquguquka okuphezulu kwizivumelwano ezincinci neziphakathi.
Indawo yeerugs, Ikhaphethi yangaphakathi, Ikhaphethi yangaphandle, iDoormat, iMat Mat, iCarlpet Inlaying, iYoga Mat, iMat yoLwandle, ikhaphethi yeenqwelo moya, umgangatho wekhaphethi, ilaphu lekhaphethi, ikhava yenqwelomoya, iEVA Mat, njl.
Ububanzi betafile yokusika ziimitha eziyi-2.1, kwaye ubude beetafile bungaphezulu kweemitha ezili-11 ubude. Ngetafile ye-X-Long, ungasika iipateni ezinde kakhulu ngokudubula, akukho sidingo sokusika isiqingatha seepateni emva koko uqhubekeke nezinye izinto. Ngenxa yoko, akukho sithuba sokuthunga kwisiqwenga sobugcisa esenziwe ngulo matshini. Uyilo lwetheyibhile ye-X-Long isebenza kwiimathiriyeli ngokuchanekileyo nangokufanelekileyo kunye nexesha elincinci lokutya.